तपाइलाई थाहा छ ? विहान खाली पेटमा किसमिस खाए यस्तो चमत्कार हुन्छ - Enepalese.com
तपाइलाई थाहा छ ? विहान खाली पेटमा किसमिस खाए यस्तो चमत्कार हुन्छ
इनेप्लिज २०७६ जेठ १ गते २२:३१ मा प्रकाशित
आयुर्वेदका अनुसार प्रत्येक दिन विहान खाली पेटमा किसमिस खाने गरेमा क्यान्सर र मृगौंला सम्बन्धी रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
साथै यसबाट शरीरिक कमजोरी सम्बन्धी कमजोरी हटाई, शक्रित बढाउन किसमिसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । आउनु होस आज हामी किसमिसको नियमित सेवनले अरु के के फाइदा हुन्छन् त ? यसबारेमा जानकारी दिन्छौं जुन यसप्रकार छन् । ज्वरो निको पार्ने : किसमिसमा पाइने एन्टी बायोटिक तत्वले ज्वरोलाई छिटो कम गर्न मद्दत गर्छ ।
किसमिस नियमित सेवनले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउछ । साथै शक्तिको तह पनि बढाउन मद्दत गर्छ ।